Sunscreen for Baby & Toddler | Ahụike na Mgbochi | Foto ndị na-acha agba agba maka nbudata
Sunscreen for Baby & Toddler | Ahụike na Mgbochi
Ngwa uwe kwesịrị ekwesị maka nwa na nwa
Ihe nchebe ọzọ
Ka ụmụ ọhụrụ na ụmụaka nwee ike ịnụ ụtọ anyanwụ, ọ dị mkpa iji nlezianya mee ụfọdụ. Nke a bụ eziokwu karịsịa, ebe ọ bụ na anwụ kwesịrị ekwesị maka ụmụaka ruo afọ 2.
Ọkụ pụrụ iche maka akpụkpọ anụ nke ụmụ ọhụrụ na ndị na-eto eto
Nke a dị mkpa n'ihi na akpụkpọ anụ nke ụmụ ọhụrụ na ndị na-eto eto dị nnọọ njọ. Karịsịa mgbe ọ na-abịa UV radieshon.
Nchebe anyanwụ maka nwa na nwantakịrị - n'agbanyeghị na-eguzogide n'oge ichikota
Akpụkpọ ahụ ka dị ezigbo mkpa na afọ mbụ nke ndụ nakwa na UV-echebe, nke gbara akpụkpọ ahụ gburugburu, aghaghị ibu ụzọ mepụta ihe na-eme na afọ mbụ nke ndụ. N'ezie, ọ bụ mgbe nile ka a ga-enye ụmụaka ohere iji egwu egwu, egwu egwu ma kwaga n'èzí. N'ezie, ebe ọ bụ na a manyere ụmụaka ka ha kpuchie UV radiation, a ghaghị iji ihe nchedo ụfọdụ.
Ọ dị mkpa ka ụmụaka jiri ọtụtụ n'ime afọ abụọ mbụ nke ndụ ha na ndò. Karịsịa n'oge a, ụmụaka ga-ekpughe dịka o kwere mee ma ọ bụ ka ìhè anyanwụ dị mfe. Ebe nchekwa dị mma n'ebe a.
A ghaghị izere anyanwụ ahụ kpọmkwem ma ọ bụrụ na a na-enye ya ebe nchekwa anyanwụ dị ka mkpuchi ma ọ bụ parasol, dịka o nwere ike ime ka ụmụ ahụ kpuchie. N'afọ mbụ nke ndụ ị ga-eme n'enweghị sunscreen. Nke a nwere ike na-ebute ụmụ anụ ahụ dị njọ.
Ọ dịkwa mkpa na mmanụ aṅụ abụghị ihe nchekwa anyanwụ. Site na mmanụ ahụ, a na-akwalite ihe ngosi nke akpụkpọ anụ. Ma ọ bụghị naanị maka ụmụ ọhụrụ, ọbụnadị maka ụmụaka ruo mgbe ha gụsịrị akwụkwọ, ọ dị mkpa ka ha zere anyanwụ na-achasi ike. Maka ihe dị ka elekere otu ụbọchị, ụmụ kwesịrị igwu egwu, romp, na ịkwaga n'ime ikuku ọhụrụ. Nke a na-akwado mmepe ụmụaka. N'otu aka ahụ, nchịkọta onwe onye dị mkpa vitamin D.
Ma ìhè anyanwụ kpọmkwem na-ezere ọbụna mgbe afọ abụọ mbụ nke ndụ gasịrị. Nke a bụ tumadi n'ihi eziokwu ahụ na akpụkpọ ahụ ụmụ nwere ike ghara ịmepụta pigmenti, nke bụ akụkụ nke nchebe anụ ahụ, zuru ezu na ngwa ngwa. A ghaghị izere ntaramahụhụ ma ncha ọbara ọbara ọ bụla. A na-ekpuchi sunscreen kachasị mma na ebe nchekwa na mgbakwunye ndị uwe ojii.
Na mgbakwunye na ebe nchekwa, ebe kachasị mma nke anyanwụ bụ uwe kwesịrị ekwesị. Karịsịa isi, karịsịa n'olu, ntị na ihu dị nnọọ nhịahụ. Ya mere, nwatakịrị kwesịrị iyi uwe, okpu, ma ọ bụ ihe dị ka anyanwụ. Uwe ndị ọzọ kwesịrị ịdị na-ekuku ma na-ekpuchi ọtụtụ akụkụ nke ahụ dị ka o kwere mee.
Ekwesiri ighota na obugh ihe nile di n'igwe. Otú ọ dị, e nwere uwe pụrụ iche nke anyanwụ, nke na-enye nchebe dị mma site na akwa ákwà.
N'okwu kachasị mma, ha na-edekọ na 801 UV ma nwee ihe nchedo UV nke ma ọ dịkarịa ala 30. Maka akpụkpọ ụkwụ, ndị a kwesịrị ikpuchi ụkwụ dị ka o kwere mee.
Sunscreens dị ka ihe ọzọ
Na mgbakwunye na uwe kwesịrị ekwesị, akụkụ ahụ niile kpuchiri ekpuchi kwesịrị echedo ya site na ebe nchekwa kwesịrị ekwesị. Ekwesiri ighota na ichikota ndi ozo agaghi eme ka umu ha kwere ka ha kpoo na anyanwu. Jiri naanị sunscreen nke e mere maka ụmụaka.
Tụkwasị na nke ahụ, onye kwesịrị ijide n'aka na ego na-agbachapụ ụmụ anụ ahụ na-adọrọ adọrọ karịa ụrọ na creams. Igwe na-enye anyanwụ kwesịrị igbochi ikikere UV-A na UV-B ma kwesịkwara inwe ma ọ dịkarịa ala otu SPF nke 20. A ghaghị ichota ebe niile a na-ekpuchighị ekpuchi banyere 30 nkeji tupu ị apụ. Ọzọkwa, a ghaghị itinye nzere ọkụ.
Ọ bụrụ na a na-echere ogologo oge n'èzí, a ga-emegharị mmanụ ahụ ugboro ugboro. Karịsịa n'ime mmiri, enwere ntaramahụhụ na-arịwanye elu. Ya mere, a ga-eji mmiri na-asọ oyi na-adịghị mmiri.
Dị ka ọ na-emetụta anyanwụ dịka akpụkpọ bụ anya. Ọ bụrụ na ndị a dị arọ nke UV-B, ọ pụrụ iduga nsị nke conjunctiva na cornea.
Igwe ugogbe anya maka ụmụaka kwesịrị ịnọgide na-enwe ụzarị ọkụ UV
Ọ bụ ya mere ọbụna ugogbe anya maka anwụ na nchedo anyanwụ zuru oke ekwesịghị ịla n'iyi.
Otú ọ dị, ọ dịkwa mkpa na anyanwụ na-echebe na ụmụaka nwere ezi ihe nlereanya, n'ihi ya, ndị nne na nna nile kwesịrị ịṅa ntị na nchebe anyanwụ zuru ezu. Ya mere umuaka na ele anya na mmalite afo, omume kwesiri ezi n'anwu anyanwu.
Ya mere ndị nne na nna ekwesịghị ịnọ ogologo oge n'anyanwụ na-enwu enwu ma na-echebe onwe ha mgbe niile na uwe kwesịrị ekwesị na sunscreen.